ဟဒီးဆ်: အကြင်အရှင်မြတ်၏ လက်တော်တွင် မုဟမ္မဒ်၏ ဝိညာဥ်ရှိသည်။ ထိုအရှင်မြတ်ကိုတိုင်တည်၍ပြောမည်။ ဤအွမ္မသ်အနက်မှ ဂျူးဖြစ်စေ၊ ခရစ်ယာန်ဖြစ်စေ ငါကိုယ်တော်ကို ကြားသိပြီးနောက် ငါကိုယ်တော်နှင့်အတူ ချပေးခြင်းခံရသောအရာကိုမယုံကြည်ဘဲ သေဆုံးခဲ့သော် ထိုသူသည် ငရဲသားများအနက်မှပင်ဖြစ် သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အကြင်အရှင်မြတ်၏ လက်တော်တွင် မုဟမ္မဒ်၏ ဝိညာဥ်ရှိသည်။ ထိုအရှင်မြတ်ကိုတိုင်တည်၍ပြောမည်။ ဤအွမ္မသ်အနက်မှ ဂျူးဖြစ်စေ၊ ခရစ်ယာန်ဖြစ်စေ ငါကိုယ်တော်ကို ကြားသိပြီးနောက် ငါကိုယ်တော်နှင့်အတူ ချပေးခြင်းခံရသောအရာကိုမယုံကြည်ဘဲ သေဆုံးခဲ့သော် ထိုသူသည် ငရဲသားများအနက်မှပင်ဖြစ် သည်။
အမျိုးအစား: အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . ရစူလ်တမန်တော်များအပေါ် အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း။ . ကျွန်ုပ်တို့၏နဗီတမန်တော် မုဟမ္မဒ်(ﷺ)။ .
အဗူဟုရိုင်ရဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)ထံမှ ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ အကြင်အရှင်မြတ်၏ လက်တော်တွင် မုဟမ္မဒ်၏ ဝိညာဥ်ရှိသည်။ ထိုအရှင်မြတ်ကို တိုင်တည်၍ ပြောမည်။ ဤအွမ္မသ်အနက်မှ ဂျူးဖြစ်စေ၊ ခရစ်ယာန်ဖြစ်စေ ငါကိုယ်တော်ကို ကြားသိပြီးနောက် ငါကိုယ်တော်နှင့်အတူ ချပေးခြင်းခံရသောအရာကို မယုံကြည်ဘဲ သေဆုံးခဲ့သော် ထိုသူသည် ငရဲသားများ အနက်မှပင်ဖြစ်သည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဖြင့်ကျိန်ဆို၍ ပြောကြားသည့်“ဤအွမ္မသ်အနက်မှ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုကြားသိသည်”၏ ဆိုလိုရင်းမှာ ကိုယ်တော်၏ခေတ်၌ ရှိကြသူများနှင့် ကိုယ်တော်၏ နောက်ကိယာမသ်နေ့ထိ ရှိကြမည့်သူများကို ဆိုလို သည်။ “ယဟူဒီဖြစ်စေ၊ နဆွ်ရာနီဖြစ်စေ ငါကိုယ်တော်အား ကြားသိပြီးနောက် ငါကိုယ်တော်နှင့် အတူချပေးခြင်းခံရသောအရာကို မယုံကြည်ဘဲ သေဆုံးခဲ့သော် ထိုသူသည် ငရဲသားများအနက်မှပင်ဖြစ်သည်။”၏ ဆိုလိုရင်းမှာ မည်သည့် ယဟူဒီဖြစ်စေ၊ နဆွ်ရာနီဖြစ်စေ၊ ထို့အတူ အခြားမည်သူပင်ဖြစ်စေ ၎င်းထံသို့တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ (ဒအ်ဝဟ်)ဖိတ်ခေါ်မှု ရောက်ရှိပြီးနောက် ကိုယ်တော့်အား မယုံကြည်ဘဲ သေဆုံးခဲ့သော် ထိုသူသည် ငရဲဘုံတွင် အမြဲနေရမည့် ငရဲသားတို့အနက်မှပင် ဖြစ်သည်။ ဤသြဝါဒတွင် ယဟူဒီနှင့် နဆွ်ရာနီတို့ကိုဖော်ပြပြီး အခြားသူများကိုပါ သတိပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယဟူဒီနှင့် နဆွ်ရာနီတို့တွင် ကောင်းကင်ကျကျမ်းရှိကြသည်။ ထိုသို့ကျမ်းရသူတို့၏ အခြေအနေသည် ဤသို့ဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ကောင်းကင်ကျကျမ်း မရရှိသောအခြားသူတို့၏ အခြေအနေသည် ပို၍ပင်ဆိုးရွားသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့အားလုံးသည် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ သာသနာနှင့် အမိန့်နာခံမှုအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
အကြင်သူသည် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)ကို မကြားသိခဲ့သည့်အပြင်၊ ၎င်းထံသို့ အစ္စလာမ်၏(ဒအ်ဝဟ်) ဖိတ်ခေါ်မှုလည်း မရောက်ခဲ့ပါက ထိုသို့သောသူမျိုးသည် ခြွင်းချက်ဖြစ်သည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ နောက်လိုက်ရန် အရေးကြီးသည်။ ကိုယ်တော်၏ ရှရီအဟ်လမ်းစဥ်ဖြင့် လွန်လေပြီးသော ရှရီအဟ်လမ်းစဥ်အားလုံးသည် ပယ်ဖျက်ခြင်းခံလိုက်ရသည်။ သို့ရှိရာ တမန်တော်မြတ်အား ငြင်းပယ်သူသည် အခြားနဗီတမန်တော်(အလိုင်ဟိစ္စလာမ်)များကို အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်ထားလျှင်လည်း ထိုယုံကြည်ချက်သည် ၎င်းအား အကျိုးမပေးနိုင်ပေ။
နောင်တမလွန်ကို မတွေ့မြင်ရသေးပါက ရောဂါပြင်းထန်ပြီး ကွယ်လွန်ရန်အလွန်နီးကပ်နေလျှင်လည်း အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံခြင်းဖြင့် အကျိုးခံစားနိုင်သည်။
အကြင်သူသည် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)ယူဆောင်လာသည့်သာသနာအနက်မှ အချို့ကို ငြင်းပယ်လျှင် ၎င်းငြင်းပယ်လိုက်သည့်အရာသည်(ကုရ်အာန်၊ဟဒီးစ်၌)ထင်ရှားပြတ်သားသော အထောက်ထားဖြင့် အတည်ဖြစ်လျှင် ထိုသူသည် ကာဖိရ်ဖြစ်ကြောင်း သာသနာ့ပညာရှင်အားလုံးတညီတညွတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။
အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . ရစူလ်တမန်တော်များအပေါ် အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း။ . ကျွန်ုပ်တို့၏နဗီတမန်တော် မုဟမ္မဒ်(ﷺ)။ .
ငြင်းပယ်သူမှအပ ငါကိုယ်တော်၏ အွမ္မသ်သားအားလုံးသည် ဂျန္နသ်သုခဘုံသို့ ဝင်ရောက်ကြရမည်။ အို - အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ရစူလ်တမန်တော် ငြင်းပယ်သူသည် မည်သူဖြစ်ပါသနည်းဟု လျှောက်ထားမေးမြန်းကြသည့်အခါ ကိုယ်တော်က မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ မည်သူမဆို ငါကိုယ်တော့်အမိန့်ကိုနာခံလျှင် ထိုသူသည် ဂျန္နသ်ကိုဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မည်သူမဆို ငါကိုယ်တော်၏ အမိန့်ကိုမနာခံလျှင် ထိုသူသည်ငြင်းပယ်သူဖြစ်သည်။